Mourinho oo sharaxaad ka bixiyay dhibaatooyinka ay la kulantay Manchester United xiliyadii lasoo dhaafay – Gool FM
Mourinho oo sharaxaad ka bixiyay dhibaatooyinka ay la kulantay Manchester United xiliyadii lasoo dhaafay
(Manchester) 05 Okt 2018. Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa qirtay inaysan aqbali doonin in Red Devils ay ku fashilanto kulankeeda shanaad ee xiriir ah inaysan wax guul ah ku gaarin garoonkeeda Old Trafford, markii ugu horeesay kadib 29 xili ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Manchester United ayaa Old Trafford guuldarro kala kulantay Tottenham iyo kulankii Derby County ee koobka Carabao Cup, halka ay barbaro la galeen kooxaha Valencia iyo Wolverhampton.
Si kastaba Red Devils ayaa habeen dambe ee Sabti ah ku soo dhaweyn doonta garoonka Old Trafford kooxda Newcastle United si ay u wada ciyaaraan kulanooda 8-aad ee horyaalka Premier League, wuxuuna tababare Jose sheegay in aan loo dul qaadan Karin in markale ay dhibco ku lumiyaan Old Trafford.
“Wax guul ah kuma gaarin garoonkeena, taasi waa run, hal guul darro kaliya ayaan kala kulanay xili ciyaareedkan oo dhan gaar ahaan 7-dii kulan ee lasoo dhaafay”.
“Laakiin ma jiraan wax guul ah ee aan gaarnay saddexdii kulan lasoo dhaafya, 3 barbaro ma ahan dareen la mid ah tan guuldarada, balse ma lahan sidoo kale farxada guusha, sidaas darteed muhim ayay inoo tahay inaan isku dayno inaan badino kulanka Sabtida”.
Saraakiisha Barcelona oo qorsheenaya in dhibaatada ka heysata dhanka difaaca ay ku xaliyaan xidiga kooxda…
Xavi Hernandez oo hal arin ku niyad jabiyay jamaahiirta kooxda Barcelona